यौ’न क्षमता बढाउन चाहानुहुन्छ ? यी ११ चिज खानुहोस् !
याै’न क्षमता बढाउने चाहाना सबैलाइ हुन्छ । तरपनि हामिले यस बिषयमा ध्यान दिएका हुदैनाै । अाज हामिले केहि घरेलु उपाय बारे जानकारी दिदैछाै ।
खरबुजामा सिटुलाइन नाम गरेको एमिनो ए’सिड प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जसले यौ’नांगमा रक्तसञ्चार तीव्र पार्छ । यौ’नांगमा रक्तसञ्चार तीव्र पार्नकै लागेर भि’याग्रा लिने गरिन्छ । जुन काम खरबुजा खाएर पनि गर्न सकिन्छ ।
अदुवा खानाले यौ’नांगसहित शरीरका सबै भागमा रक्तसञ्चार तीव्र हुन्छ । से’क्सअघि अदुवा हालेको चिया खाने गरेमा शरीर तात्छ, मुटुको धड्कन र रक्तसञ्चार तीव्र हुन्छन् ।
एभोकाडोमा भिटामिन बी–६ र पोटासियम प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् । भिटामिन बी–६ ले पुरुषमा से’क्स हा’र्मोन बढाउने गर्छ । पोटासियमले महिलाको थाइरा’इड ग्रन्थिलाई स्वस्थ राख्छ । थाइ’राइड ग्रन्थिको सम्बन्ध व्यक्तिको यौ’न क्षमतासँग हुन्छ । एभोकाडोमा फोलिक ए’सिड पनि प्रशस्त पाइन्छ, जसले मुटुलाई बलियो पार्ने र शरीरलाई ऊर्जा दिने काम गर्छ ।
तुलसीको पाउडर अथवा तेल शरीरमा दल्नाले अथवा तुलसीको पात खानाले शरीरमा यौ’न हार्मोनको उत्सर्जन बढ्छ ।
लसुनमा एलिसिन नामक तत्व पाइन्छ, जसले यौ’नांगमा रक्तसञ्चार तीव्र गराउँछ । राम्रो यौ’न जीवनको चाहना गर्नेले लसुनको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।
कुरिलोमा भिटामिन–ई र फोलाइट पाइन्छन्, जसले पुरुष तथा महिला दुवैलाई यौ’नका क्रममा चरमोत्कर्षको अवस्थामा चाँडै पुग्न सघाउ पु¥याउँछ ।
केरामा ब्रोमेलाइन नामक इन्जाइम प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसले का’मोत्तेजना बढाउने गर्छ । त्यसै गरी यसमा पाइने पोटासियम र भिटामिन–बीले पुरुष तथा महिला दुवैमा सेक्स’ हार्मोन र ऊर्जा बढाउने गर्छन् ।
अण्डामा भिटामिन बी ६ र भिटामिन बी ५ प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यिनले से’क्स हार्मोनसहित समग्र हार्मोनलाई सन्तुलनमा राख्ने गर्छन् । त्यस्तै, यसमा पाइने भिटामिन बी १२ ले पुरुषमा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढाउने गर्छ ।
रातो खुर्सानी खानाले मुड बनाउने इन्डोर्फिन नामक तŒव शरीरमा बढी रिलिज हुन्छ । यसबाट रक्तसञ्चार तीव्र बन्छ । स्वस्थ यौ’न जीवनका लागि तीव्र रक्तसञ्चार आवश्यक छ ।
फर्सीको बियाँमा ओमेगा–३ नामक फ्याटी एसि’ड र जिंक पाइन्छन् । यसले यौ’न जीवनलाई भव्य बनाउने हार्मोन उत्पादनलाई तीव्र बनाउने काम गर्छ ।
सांकेतिक तस्बिर – गुगल